Zaza 2 andro
Breastfeeding Videos Ity zaza hita eto ity dia vao teraka 40 ora teo aloha. Mipetaka amin’ny nono tsara ilay zaza. Ny saokany dia mikasika amin’ny nono tsara, fa ny orony dia misitaka kely amin’ny nono, ary ny molony ambany dia manarona ny lohanono avy ato ambany mihoatra ny molony ambony. Amin’ny voalohan’ny horonantsary, miato tsindraindray ny saokany, fa amin’ny ankabezany dia mitsetsitsetsitra fotsiny izy fa tsy tena misotro. Mipotsitra nono ny reniny fa tsy matetika toa ny ampianarinay. Tokony mipotsitra izy rehefa mitsetsitra ilay zaza fa tsy misotro, fa tsy rehefa tsy mitsetsitra mihitsy akory. Ny manindry nono amin’izao taona’ny zaza izao (aloha’ny miakatra ny nono), dia tsy misy vokany raha tsy atao imbetsaka, tsy toa ny rehefa miakatra ny nono, dia tonga dia misy vokany ny manapotsitra ny nono. 1 min amin’ny horonantsary, manomboka misotona nono ilay zaza fa sorena amin’ny fivoakan’ny nono moramora. Dia 1min sy 14 segondra, hita fa mavitrika misotro ilay zaza dia hita fa fiatoana maromaro amin’ny saokany.
Manindry nono tsy ankijanona ny reniny mandra-pijanon’ilay zaza misotro, dia avy eo avelany (1 min sy 30 segondra).
Miverina misotro ndray ilay zaza avy eo (1min 37 segondra). Ny zaza mandray nono tsara sy noana dia tonga dia misotro tsara fa tsy mila kitikitihana ny tongony na asiana lamba lena ny andriny. Ny zaza dia tsy tafatory eo amin’ny nono satria hoe vizaka, fa nono ny fihenan’ny fivoakan’ny nono. Ahoana ny hitazomana ny nono hikoriana?
1) fandraisana nono tsara 2) Fanindriana nono rehefa mitsetsitra ny zaza fa tsy misotro
Jereo ilay zaza ao anatin’ny horonantsary “Fampidiriana Fanampiana mampinono” fa taitra ary tonga dia mavitrika misotro raha vao mikoriana ny ronono. Mariho fa mety indray ny fanindriana nono ao amin’ny 2 min marika eo. Subscribe to our Newsletter